Darpan Nepal – यी ५ राशिका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका ! पूरा पढ्नु होस ।।
यी ५ राशिका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका ! पूरा पढ्नु होस ।।
Jul 19, 2018adminReligion/Rashifal0Like
एजेन्सी । प्रेममा धोका खानु आजकालका युवा युवतीमा कुनै अचम्मको कुरा होइन। आजको युवा पुस्तामा प्रेममा धोका खानु अर्थात प्रत्येक दिन ‘प्याचअप’ र ‘ब्रेकअप’ हुनु धेरै सामान्य कुरा हो।
तर यसको अर्थ यो होइन कि आजकल कुनै पनि साँचो माया गर्ने मान्छे छैन। तर प्रायः यी साँचो माया गर्ने मान्छेले जसरी पनि मायामा धोका पाउँछन्। अहिले प्रचलन यस्तो बस्यो की आजकल जसलाई पनि जो कसै न कसैले धोका दिन्छन् ।
यस राशिका पुरुषहरु सबै भन्दा बढी फ्रड (झुठा) हुन्छन्। उनीहरु आफ्नो प्रेमिकाको सबै साथीहरूसँग कुराकानी गर्छन्। तर उनीहरु जोसँग माया गर्छन् उनीहरुका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश, यस राशिको केटाहरुको प्रेमिकाले उनीहरुको जिस्किने बानीलाई मध्यनजर गरेर कहिले पनि यसलाई १०० प्रतिशत मनन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यस राशिका केटाहरुले प्रेममा धोका पाउँछन् ।
यस राशिका पुरुष जोशीला हुन्छन् र उनीहरू आफ्नै संसारमा हराएका हुन्छन्। अन्तमा, तिनीहरूका पार्टनरले तिनीहरू लाई छोड्छन्। उनीहरूले यी कुराहरू ठीक गर्न पनि प्रयास गर्दैनन्। तर त्यतिबेला यो ढिला भैसकेको हुन्छ ।
Previous Postनेपालमै बन्यो ३५ लाखमा यस्तो पुल पूरा जान्नु होस ।। Next Postमासु र वियर अनि ‘मुकुन्दे"मुकुन्द घिमिरेको फाईभ स्टार अनुभव, बियर, मासु अनि राष्ट्रपती हुने दावीगर्ने भुँईमान्छेहरु